Nidaamka raadinta shahaadada Anbotek
1. Ku buuxi magaca codsadaha oo dhammeystiran iyo lambarka caddeynta ee baaritaanka ee aad u baahan tahay sanduuqa gelinta (fadlan qor lambarka warbixinta oo keliya warbixinta, iyo lambarka sirta ah ee soo galitaanka waa taariikhda dhammaystirka kiiska, maalinta, bisha iyo sanadka. Haddii warbixinta shahaadada ee Juun 11, 2017 la soo gabagabeeyo, lambarka sirta ah ee soo galku waa 11062017).
2. Fadlan ha isticmaalin furaha booska markaad buuxinayso foomka.
3. Shahaadooyinka aan soo marin arjiga Anbotek kuma jiraan baaritaanka.
4. Haddii shahaadadaada aan weli la helin, waxay noqon kartaa in shahaadadaada aan la gelin keydkeena. Fadlan nala soo xiriir.
Sababtoo ah mabda'a sirta ah ee macluumaadka macaamiisha, nidaamkan baaritaanka wuxuu kaliya xaqiijin karaa ansaxnimada lambarka shahaadada aad weydiisay iyo macluumaadka sheyga aasaasiga ah.
Cinwaanka emailka: Service@anbotek.com
Shahaadada / warbixinta warbixinta iyo baaritaanka anbotek:
1. Adeegan baaritaanku wuxuu khuseeyaa oo keliya macaamiisha saxeexay heshiiska lagu aaminay ee lala galayo shirkadeena si ay u hubiyaan habka tijaabada ee shay-baarkooda una hubiyaan natiijooyinka baaritaanka shay-baarka. Natiijooyinka imtixaanka ugu dambeeya ee shay-baarka waxay ku xiran yihiin warbixinta baaritaanka ee ay shirkaddeena si rasmi ah ugu gudbisay macaamiisha.
2. Iyadoo aan la haysan ogolaansho qoraal ah oo shirkadeena ah, qofna ma nuqulan karo, dib uma daabici karo ama uma isticmaali karo xogtan weydiinta qaab kale; iyadoo aan la helin cadeyn qoraal ah oo ku saabsan shirkadeena, xogtaan baaritaanku ma meteleyso qiimeyn kasta oo lagu sameynayo muunada la soo gudbiyay iyo isla sheyga wax soo saarka ah muunad ahaan, mana laha wax saameyn ah oo shahaado ah.
3. Khasaaraha dhaqaale ee ka soo gaadha macaamiisha, shirkadda ama cid kasta oo saddexaad oo ay sabab u tahay macaamiisha oo si khaldan u adeegsada maamulkooda baaritaanka, aqoonta sharci darrada ah ee dadka kale ama oggolaansho aan sharciyeysnayn oo kuwa kale ah waxaa qaadaya macaamiisha laftooda, shirkadduna ma qaadi doonto wax deynta sharciga.
4. Haddii macaamilku wax diidmo ah u leeyahay natiijooyinka weydiinta, fadlan la xiriir shirkaddayada waqtigeeda. Shirkadeena ayaa hubin doonta waqtiga ugu horeeya isla markaana ka caawin doonta wax ka qabashada.
5. Shahaadada lama heli karo haddii:
1) waxay noqon kartaa in shahaadada aad waydiisay aan la galin keydkeena.
2) macluumaadka weydiinta shahaadada aad qortay waa khalad; Fadlan iskaan nuqul ka mid ah shahaadada una soo dir service@anbotek.com. Waxaan ka jawaabi doonnaa oo ka jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.